ဘိလပ်မြေစက်ရုံချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ
အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Cement,ဘိလပ်မြေစက်ရုံ Pulse Deduster,Long ကအိတ် Filter ကို Pulse
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Cement,ဘိလပ်မြေစက်ရုံ Pulse Deduster,Long ကအိတ် Filter ကို Pulse
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > အိတ်-type အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေး > ဘိလပ်မြေစက်ရုံချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို
ဘိလပ်မြေစက်ရုံချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို
 ဘိလပ်မြေစက်ရုံချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို
ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက်သွေးခုန်နှုန်း type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို
1. LCM ရှည်လျားအိတ်သွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုရိုးရာအတိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို၏အခြေခံပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးအသစ်တစ်ခုကိုအကျိုးရှိစွာအိတ် filter ကိုဖြစ်ပါတယ်။
2, ကအခန်းတစ်ခန်းမှုတ်များနှင့်ပြာမှုန်ဖယ်ရှားရေးနည်းပညာမှုတ်သွေးခုန်နှုန်းကျပ်ခိုးပေါင်းစပ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုပြာဖယ်ရှားရေးယန္တရား၏အားသာချက်များရှိပါတယ်, ခိုင်မာတဲ့ချုံ့လေကြောင်းကျပ်ခိုးမှုတ်ရန်အပြည့်အဝဆော့ကစားပေး
အဆိုပါ LCM ရှည်လျားအိတ်သွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုသတ္တုဗေဒ, စက်ပစ္စည်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, စက္ကူချမှတ်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ LCM type ကိုတာရှည်အိတ်သွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုတစ်ဦးလေကြောင်းဝင်ပေါက်များနှင့်တစ်ဦးလေကြောင်းထွက်ပေါက် device ကိုတစ်ပြာ Hopper တွေလည်းတစ် filter ကိုအိတ်တစ်ကက်ဘိနက်၏အဓိကအားဖြင့်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
1, မြေမှုန့်ဓါတ်ငွေ့လေဝင်ပေါက်များမှတဆင့်သေတ္တာထဲသို့ဝင်သဖြင့်, မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအလုပ်လုပ်ဆက်လက်အဖြစ်ကိရိယာများတိုး၏ခုခံနိုင်အောင် 2, ဖုန်မှုန့်, ပိုမိုစိစစ်ရန်အိတ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပါးတို့သည်သွေးခုန်နှုန်း device ကို Hopper တွေလည်းနှင့်ပြာများဖယ်ရှားရေးကိရိယာကိုချ, မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား၏အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
1. Long က filter ကိုအိတ်ဒီဇိုင်းကိုသံမဏိ၏စားသုံးမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကြမ်းပြင်ဧရိယာလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
2, မြင့်သောအလိုက်အထိုက်နေတတ် LCM ရှည်လျားအိတ်သွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုဖုန်မှုန့်ဓါတ်ငွေ့၏ကြီးမားသောပွောငျးခွငျးအကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမဟုတ်သော - စံဒီဇိုင်းကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။
သုံး။ အဆိုပါအနိမ့်ထုတ်လွှတ်အာရုံစူးစိုက်မှု 50mg / အမ်အဆိုပါ LCM အိတ် filter ကတင်းကျပ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တာထက်လျော့နည်းစေခြင်းငှါအာမခံနိုင်ပါတယ်။
4, ယိုစိမ့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းအကြောင်းကို 4% ၏နိမ့်ဆုံးယိုစိမ့်မှုနှုန်းသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန် 5. အားလုံးသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်;
7, အဆင့်မြင့်သည် Programmable ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (PLC) ချမှတ်;
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဘတ်ဂျက်အရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများအနေနဲ့အကျိုးရှိစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အမိန့်အရကျနော်တို့ကတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မိန့်မီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုစက်သို့မဟုတ်ပွဲချင်းပြီးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တိုင်းဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > အိတ်-type အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေး
ဘိလပ်မြေစက်ရုံချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ type ကိုတာရှည်အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေမှုတ်စက်အိတ် filter ကိုနှင့် rotary လညျးမီးဖိုမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Cement , ဘိလပ်မြေစက်ရုံ Pulse Deduster , Long ကအိတ် Filter ကို Pulse , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Pulse Valve , Wood ကသည်အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , စက် Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Woodworking , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး Conveying ပစ္စည်း